China Counter-eruba Emechiela Circuit Cowing Towers / Evaporative Emechibidoro circuit Coolers Manufacturer and Supplier | Yubing
Tụnyere ndị na-emeghe-usoro jụrụ ụlọ elu, mfe ịnọgide na-enwe bụ a pụrụ iche atụmatụ nke ICE si evaporative emechi circuit Coolers nke bụ ihe magburu onwe nhọrọ maka ihe ọ bụla jụrụ usoro na uru ndị ọzọ na-esonụ:
► Belata mmiri oriri, chekwaa ike na akụrụngwa mmezi.
► Zere ihe ize ndụ dị mkpa nke imebi ihe na ndị na-agbanwe ọkụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị yiri ya.
► Ntinye dị mkpa na arụmọrụ na-akwụ ụgwọ ego (enweghị mkpa mgbapụta, valvụ, ọrụ ọkpọkọ ndị ọzọ na wdg)
►Gburugburu ngwa ngwa - ngwa mechiri emechi iji rụọ ọrụ na okpomọkụ dị n'èzí. Ọ bụ ihe dịgasị iche iche site na ngwa ngwa usoro mmepụta ihe iji nọgide na-enwe okpomọkụ na ebe data na ụlọ kọmputa iji mepụta kemịkal.
Ice evaporative counter-eruba mechiri emechi circuit coolers 'Ọdịdị na isi components iwebata:
Sistemụ ikuku (Fan)
N'èzí axial ofufe na ezi arụmọrụ nke atọ nchedo imewe, onwem na aluminum agụba na IP56, F klas chụpụrụ moto na rata na ventilator nke ga-egbochi ikuku na belata leakage.
ICE evaporative emechi loop jụrụ ụlọ elu arụnyere nkata ụdị ịgba nozzles anọgide clog free mgbe na-enye ọbụna na mgbe nile na-ekesa mmiri jirichaa okpomọkụ nyefe n'etiti ikuku, mmiri na usoro ọmụmụ ka iwelie okpomọkụ ojuju arụmọrụ.
Ihe nkedo na-agba agba na-etinye na ọkpọkọ mmiri na-enweghị mmiri maka ikpochapu dị mfe.
Red Ọla kọpa tube
Igwe akụrụngwa bụ isi na-eji T2 ụdị ọla kọpa dị elu nke zụtara n'aka onye nrụpụta ama ama iji hụ na ọrụ anyị nwere ntụkwasị obi ma kwụsie ike.
Wuru ma mee PVC iji belata mmiri na-efu n'oge mmiri na-arụ ọrụ ma gbochie ọnụego ntụgharị iji belata mmiri mmiri ma zere ọnụ ọgụgụ.
Louver na Damper
E nwere a damper na-eje ozi iji chịkwaa ikuku ikuku n'oge a na-arụ ọrụ nke ụlọ elu dị jụụ etinyere na mmiri ụfọdụ, usoro mgbapụta ikuku ọkụ ma ọ bụ usoro jụrụ oyi yiri ya iji zere ọkụ ọkụ n'oge ọdịda nke akụrụngwa karịsịa na ihu igwe oyi.
Mgbe ikuku ikuku dị n'elu 0 ℉ (-18 ℃), ya na onye na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ahụ agaghị adị ala karịa 40 ℉ (4.4 ℃). Enwere nchedo mmiri dị ala na kpo oku iji hụ na ọ ga-arụ ọrụ naanị mgbe etinyere ya na mmiri. Ejirila ihe niile gbasara igwe ọkụ eletrik n'ime ikpe ahụ ma gbanwee maka ọrụ mpụga.
Mkpọda-imewe Water Basin
Ihe mkpọda mkpọda (tilt kwupụta ụzọ ọpụpụ na-emerụ emerụ) iji zere nkwụsị mmiri na igwe anaghị agba nchara ga-eme ka njupụta na nchapu nsị na-ehichapụ ihe na-adịghị ọcha na bezin.
ICE ọkọlọtọ jụrụ ụlọ elu jiri ọhụrụ ukwuu corrosion na-eguzogide ntekwasa ígwè mpempe akwụkwọ nke iso zinc dị ka isi mkpụrụ, na Nchikota na Al, Mg na a Chọpụta nke sịlịkọn. The ọrụ ndụ bụ 3 ~ 6 ugboro aba tụnyere na nkịtị aluminized zinc ígwè mpempe akwụkwọ na okpomọkụ-eguzogide na thermal eguzogide mma bụkwa ihe magburu onwe.
Nke gara aga: Cross-flow Emechiela Circuit Cowing Towers / Evaporative Closed-circuit Coolers
Osote: ICE Chemical Dosing System for Water Treatment in Cooling Tower System
Nka na ụzụ teknụzụ nke Counter-flow Emechiri-circuit Cooling Tower
Inlet / tinyekwa anwụrụ size
Tụkwasịnụ ọkpọkọ size
Nrụgide Nrụgide Ọrụ
Emechiri circuit oyi
Emechiri Cooling Tower
Emechie-Circuing jụrụ Tower
Emechiela-akaghị Cooling Tower
Towerlọ elu jụrụ ikuku na-emechi emechi
Evaporative mechiri oyi
Evaporative Emechiela coolilng ụlọ elu
Mmiri-mechiri emechi loop jụrụ ụlọ elu